२००७ सालयता कुनै सरकारले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । एउटै व्यक्ति बरु पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए तर एउटा सरकार कहिल्यै पाँच वर्ष टिक्न सकेन। २०१५ सालको निर्वाचनमा बहुमत आयो, २०४८ मा बहुमत आयो, २०५६ मा बहुमत आयो । बहुमत आए पनि ती कुनै सरकार पाँच वर्ष टिकेनन् ।
त्यस्तो किन भयो– अस्थिरताका शक्तिहरु बलवान रहे । अस्थिरता बनाइरहने, अस्थिरता बढाइरहने र प्रतिगमनमा खेलिरहने काम भयो । नेपालमा बहुमत नआउने प्रणाली एकढंगले भन्ने हो भने हामीले पनि बोक्यौँ तर त्यसलाई पनि पराजित गरेर हामीले बहुमत ल्याएका छौँ । यो साधारण कुरा होइन।
इतिहासमा पहिले कहिल्यैभन्दा बढी राजनीतिक हिसाबले, सुशासनको हिसाबले, शान्ति सुव्यवस्थाको हिसाबले, आर्थिक उन्नतिको हिसाबले, आर्थिक योजनाको हिसाबले, समग्र उपलब्धिका हिसाबले अथवा सामाजिक सुप्रबन्ध, सामाजिक न्याय र समानता तर्फको हाम्रो प्रयासका हिसाबले, साँस्कृतिक जागरण र उत्थानका हिसाबले असाधारण प्रयासहरु गरिएको छ । पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि बढाउनको लागि असाधारण प्रयासहरु गरिएको छ । यी सबै प्रयासहरुको चर्चा नगर्ने, यिनलाई ओझेलमा पार्ने र विभिन्न ढंगले भ्रम पैदा गर्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् । यस्ता कुराहरुसँग हामी सजग हुनुपर्दछ।
हामीसानो लडाइँ लडिरहेका छैनौँ । शताब्दीयौंदेखि चलेको एउटा महान लडाइँ लडिरहेका छौँ । यस विजयलाई सहन नसक्नेहरुले फेरि जनतालाई अलमल्याउने र भ्रमित पार्ने प्रयास भइरहेको छ । जनताको हातमा धेरै चिज हुँदैन । अनि साधन स्रोत सम्पन्नहरुले त्यसको प्रयोग गरेर र खासगरी विभिन्न संचार माध्यमहरु, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर, त्यसमा लगानी गरेर, त्यसमा मान्छेहरु खटाएर त्यसमार्फत उनीहरुले हमला गर्न खोज्छन्।
सारा उपलब्धिहरुलाई ओझेल पार्ने र नभएका कुराहरुलाई उछाल्ने काम गर्न खोज्छन् । जनताले त सबै कुरा, तिनको अन्तरवस्तु र सबै पक्ष बुझ्न पाएका हुँदैनन्। त्यसकारण भ्रम फिँजाएपछि त्यसको असर जनतामा परिराखेको हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुले भ्रम फिँजाउँछन् । यस्ता रवैयाहरुप्रति हामीहरु सजग हुन जरुरी छ । अचेल म देख्छु, हरेक कुरामा यस्तो गरी हमला गरिरहेका हुन्छन्, यसै हिसाबले हमला गरिरहेका हुन्छन्।
उदाहरणका लागि, केही दिन अगाडि गोकर्ण रिर्सोटको लिज अवधि थपियो । यसरी थपियो, जसरी पहिले कहिल्यै थपिएको थिएन । पहिले हचुवाका भरमा मूल्य राख्ने, हचुवाका भरमा लिज दिने गरिएको थियो । कति रकममा लिज भन्दा हचुवाको भरमा तय गरिएको हुन्थ्यो । अहिले विभिन्न स्वतन्त्र संघसंस्थाहरुबाट मूल्याङ्कन गराएर, मूल्याङ्कनका विधिहरु तयार गरेर, त्यस विधिअन्तर्गत यति हुँदो रहेछ र यति मूल्यमा लिजमा दिनुपर्ने हुन्छ भनेर यथार्थमा आधारित भई मूल्य तय गरिएको छ।
अर्को, अवधि बाँकी रहदै किन दिइयो भन्ने प्रश्न गरेको पाइन्छ । अवधि बाँकी रहँदै किन दिनुपर्छ भने सरकारले कि त्यसलाई नचलाउने भन्नुप¥यो कि अरु केही गर्नुपर्‍यो । जब कसैले लिज लिएको छ, उसले प्रगति गर्छु भन्छ, उसले आकर्षक ढंगले सरकारलाई कर तिर्छु भन्छ, लिजबापतको रकम राम्रो तिर्छु भन्छ, प्रतिस्पर्धामा जान्छु भन्छ भने त्यसले लिन नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन । र, अहिले नै दिने काम भएन भने उसले निर्माण गर्न नै सक्दैन।
बैंकबाट ऋण लिनुपर्‍यो, निर्माण गर्नुपर्‍यो, अनि संचालन गर्नु त प¥यो । बीस वर्षको लागि लिजमा लियो, दश वर्ष त निर्माण गर्न नै लाग्ने हुन्छ । त्यस कारण पहिलेको समय अवधि छँदै उसलाई लिज अवधि थपिदियो भने त्यो कुनै अुनचित कुरा हँुदैन । यस्ता कुरा अहिले ल्याएर अनेक विषय मिसाइएका छन्, जो गलत छन्।
सगरमाथा आरक्षित क्षेत्रमा कसले के ग¥यो ? त्यहाँको जमिन म अध्ययन गर्दैछु । कुनै जमानामा उसले किनेर बनाएको, अहिलेको सरकारले गरेको होइन । अहिलेको सरकार बन्नुभन्दा धेरै पहिले त्यहाँ होटल खुलेका छन् । मैले आज कालिमाटी (ताहाचल) मा पनि जग्गा लिजमा लियो भन्ने समाचार पढेँ । कतिपय यस्ता उदाहरण छन्। चुनाव हारिसक्यो, काम चलाऊ सरकार छ । त्यस्तो बेलामा ठूलाठूला कारोबार हुने गरेका, लिजमा लगाउने, किन्ने, इजाजत र लाइसेन्स दिने तिनै तत्वहरु हुन्, जसले अनैतिक ढंगले त्यस्ता कतिपय निर्णय गरेका छन् । जब सरकार अल्पमतमा परिसक्यो, उनीहरु नै अर्को सरकार बन्न नदिएर जालझेल गरिराखेका छन्, त्यस्तो बेलामा नैतिक रुपमा त कुनै निर्णय गर्न मिल्दैनथ्यो । झन् आर्थिक लेनदेनका, कारोबारका त्यस्ता कुराहरु त गर्नै मिल्दैनथ्यो । उनीहरुले त्यस्ता कामहरु गरेका छन् । अहिले तिनै तत्वहरु यो सरकारले लिजमा दियो भन्ने होहल्ला गरिरहेका छन्।
जनतालाई त सबै कुरा थाहा हुँदैन, कुन मितिमा दिएको हो भन्ने कुराको तिथिमिति सम्झना हुँदैन । कुन मितिमा दिएको कुरा अहिले ल्याएर जोड्दै कालिमाटीको पनि सस्तोमा दिइयो भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यो दियो कसले ? तथ्य चाहिँ लेख्दैनन् । अहिलेको सरकारले त्यस्तो गर्दैन।
अहिलेको सरकार कमिशनखोरको सरकार होइन । अहिलेको सरकारले मौका हेरेर त्यस्ता कामहरु गर्दैन । त्यस कारण विगतमा कसले के गर्‍यो ? ठीकसँग छानबिन गरौँ । कसले कसरी लिजमा दिएको छ ? छानबिन गरौंँ । अरु विभिन्न ठाउँका लिजहरु कसरी दिइएका छन् ? छानबिन गरौँ । नारायणहिटी दरबारअगाडि घर बनाएको कसले दिएर हो ? त्यो पनि छानबिन गरौँ । कसको समयमा लिजमा दिइयो ? त्यसलाई छोप्ने, अनि भ्रम छर्ने र विकास निर्माणमा कुनै काम हुन नदिने ? जुन काम हुँदा पनि त्यसमा विवाद खडा गर्ने ? वास्तवमा उनीहरु अहिले लिएको अग्रगमनको बाटोसँग र अहिले भइरहेको विकाससँग आत्तिएका छन् । अनि, यस्ता गलत क्रियाकलाप गरिरहेका छन्।
अहिले असाधारण ढंगले नयाँ–नयाँ कामहरु भएका छन् । आजै कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ– ६ वर्षभित्र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल बनिसक्ने र ७ खर्बको लगानी हुने भयो । त्यसको सर्भे भइसक्यो । यसले गर्दा मान्छेहरुको मन पोल्ने काम भएको छ । यो काम भयो भनेदेखि त यो सरकारले देशलाई यसरी अगाडि बढायो भन्ने जश पो पाउने भयो भनेर तिनीहरुलाई भित्रभित्रै पोलिरहेको छ र असह्य रुपमा छट्पटी भइरहेको छ।
मैले नदीको बाटोबाट समुन्द्रमा जहाज चलाउन सक्छौँ भनेँ । निकै उडाए । कति दयनीय अवस्था छ विरोधीहरुको ? पानीमा जहाज चल्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाएका छैनन् । नदीमा स्टिमर चल्छ, जहाज चल्छ भन्ने कुरासम्म त थाहा पाउनुपर्छ नि ! हाम्रा युवाहरुले कोशीमा आफ्नै तर्फबाट स्टिमर बनाएर चलाएका छन् । त्यसबाट प्रेरित भएर अहिले गण्डकी र नारायणीमा परीक्षण गरिरहेका छन् । एकथरी मानिस कागजको डुंगा बाल्टिनमा हालेर मजाक उडाउँदै थिए, अर्कोथरी पौरखी र सिर्जनशील युवाहरुले जहाज बनाएरै चलाए।
हामी ट्रक लिएर कोलकातासम्म जानुपर्दथ्यो । त्यहाँबाट डेढ सय किलोमिटरसम्म यता हामीले लिइसक्यौँ । अब गंगा नदीबाट हामीले त्यो सामान ल्याउन सक्छौँ र अब हाम्रो सामान कोशीसम्मै आइपुग्न सक्छ । केही समयपछि हाम्रो सामान गण्डकीमा आइपुग्छ।
अहिले काममा प्रगति एकदम रफ्तारले भइरहेको छ । अब छिट्टै खानीबाट फलाम निकाल्दै छौँ । तेल खानीको हामी सर्भे भइरहेको छ । म विश्वस्त छु, त्यहाँबाट तेल निकाल्न सकिन्छ । अरु खानीहरु पनि हामी निकाल्दै छौँ।
हामी सिमेन्ट निर्यात गर्ने स्थितिमा पुग्दैछौँ । आफ्नै खानीबाट फलाम निकालेपछि बाहिरबाट फलाम ल्याउनेभन्दा हामी निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा हुनेछौँ । त्यसबाट हामी अटोमोबाइल्स् आदिका कारखानाहरु, निर्माण सामग्रीहरु आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सक्नेछौँ । जसले गर्दा व्यापारमा हाम्रो जुन असमानता र घाटा छ, त्यसलाई बिस्तारै पूरा गरेर सन्तुलन कायम गर्न सक्नेछौं।
हामी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दैछौँ । हामी सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोही बालबालिका स्कूल बाहिर नरहून्, त्यसको लागि ठोस प्रयास गर्दैछौँ । हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि एक लाख रकमको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । हरेक नागरिकको अनिवार्य बैंक खाता अभियान सञ्चालन गरेका छौँ।
बेरोजगारीको जहाँसम्म कुरा छ, हाम्रो बेरोजगारी अलिकति सक्कली र अलिकति नक्कली हो । धेरै चाहिँ नक्कली छ । खेतबारी बाँझै छन् । त्यहाँ बाली लगायो भने निर्यात गरेर हामीले पैसा कमाउनसमेत सक्छौँ । हाम्रा युवाहरुलाई त्यो बाटो नदेखाएर खेतबारी बाँझो छाडेर उनीहरु भेडा चराउन अरब पुगेका छन् । यहाँ हामीले उनीहरुलाई सही बाटो र वातावरण दियौँ भने आकर्षक कमाई यहीँ हुन्छ, राम्रो आम्दानी यहीँ हुन्छ।
मलाई अस्ति एकजना साथीले भन्दै थिए– उनले मेवाको खेती सुरु गरेका छन् । त्यसमा यति आकर्षक आम्दानी छ कि त्यस्तो खेती अरुले पनि गर्न सक्छन् नि ! यसमा हामीले सही ढंगले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस्ता सबै कामहरुमा तपाईं संचारकर्मीहरुको, तपाईँहरु सबैको असाधारण भूमिका र योगदान हुन्छ।
अहिले माहोल यस्तो बनेको छ, सही कुराको समर्थन ग¥यो भने अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने ? सही कुरा भन्न गाह्रो मान्नुपर्ने ? सही कुरा पनि बोल्न हुन्छ र जस्तो गर्ने ? भ्रम फिजाउन हुने, हल्ला गर्न हुने, नचाहिने कुरा गर्न हुने, तर सही कुरा गर्न, सरकारले यो राम्रो काम ग¥यो भनेर भन्न वरिपरी हेर्नुपर्ने ? के हो, तँ त सरकारको समर्थन गरेर बोल्न पो थालिस् भनेर भन्ने?
सरकार देश बनाउँछु भनिराखेको छ । सरकारले असाधारण सही नीति र दृष्टिकोण लिएको छ । दुनियाँमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सिद्धिरहेका बेला नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन यति मजबुत भएको छ, लगभग दुई तिहाइको सरकार क्रियाशील छ । अनि यस्तो बेला केही मान्छेहरु विरोधका लागि विरोध मात्र गर्छन् र गरिरहेका छन् । किन होला?
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन दुनियाँका लागि दृष्टान्त भएको छ । एकीकरण दृष्टान्त भएको छ र सफलता दृष्टान्त भएको छ । यसले सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रमा गरेका कामहरु, महिला, पछाडि परेका समुदाय र अरु समुदायको उत्थानका लागि गरेका कामहरु, मजदुरका समस्याको समाधानका सन्दर्भमा गरेका कामहरु विश्वकै लागि दृष्टान्त भएका छन्।
हाम्रै (पार्टीभित्रका) केही मान्छेहरुले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, कुण्ठा र विभिन्न कुराले यो देख्न सकिरहेका छैनन् । तिनीहरु सबै खत्तम भयोजस्तो पो भन्छन् । बोल्छन् र कोलाहल मच्चाइरहेका देखिन्छन् । तिनीहरुका बोली र व्यवहारमा आलोचना र विरोधबाहेक केही छैन ! पार्टीमा रहेर पार्टीको समर्थनमा बोल्न नसक्ने, पार्टीको सरकार यति सफलताका साथ अगाडि बढेको छ, यसको समर्थनमा बोल्न नसक्ने, विरोधमा मात्रै बोल्ने, यस प्रकारको कुण्ठाग्रस्त त कोही हुनुहुँदैन । यस्तो कुण्ठा प्रदर्शनले कसैलाई पनि कुनै सफलतामा पु¥याउँदैन । कसैको प्रतिष्ठा माथि उठ्दैन।
हामी फराकिलो मनका साथ राष्ट्र निर्माणको, विकासको र समृद्धिको अभियानमा जुटेका छौँ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो यस राष्ट्रिय आकांक्षालाई सिगों विश्वले प्रशंसा गरेको छ । चिनियाँ नेता होउन् वा भारतीय नेता, यूरोपेली नेता होउन् वा अन्य देशका नेता, जुनसुकै देशका नेताहरुसँग भेट हुँदा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको तपाईँहरुको लक्ष्य एकदमै सही छ, तपाईँहरुको गन्तव्य सही छ । तपाईँहरुले यसमा कति राम्रो सन्तुलन र संयोजन कायम गर्नुभएको छ भन्छन् । हामी ती लक्ष्य प्राप्त गर्न, ती उद्देश्य प्राप्त गर्न लागिपरेका छौं । यत्तिकै उद्देश्यको गीत मात्रै गाइराखेका छैनौँ । ती उद्देश्य कसरी प्राप्त हुन सक्छन् ? ती प्राप्त गर्ने बाटोहरु, ती प्राप्त गर्ने विधिहरु के हुन सक्छन् ? कस्तो विधि र कस्ता कार्यक्रमहरुका साथ अघि बढेर प्राप्त गर्न सकिन्छ ? हामी त्यसो गरिरहेकाछौँ।
तपाईंहरुबाट राष्ट्रले गरेको यो अपेक्षा साधारण छैन । तपाईँहरु आ–आफ्नो ठाउँका योद्धाहरु हुनुहुन्छ, तपाईंहरुले देशका लागि लड्नैपर्छ । देशका लागि लड्ने भनेको सामाजिक सद्भावका साथ राष्ट्रिय एकताका लागि लड्नुपर्छ । एकताबद्ध प्रयासबाट देश बनाउनका लागि लड्नुपर्छ । एकताविरोधी विचार, व्यवहार र अनुचित क्रियाकलापका विरुद्ध लड्नुपर्छ । अनेकता र फाटोका विरुद्ध लड्नुपर्छ । अनुशासनहीनता र अराजकताका विरुद्ध लड्नुपर्छ । अनुचित तथा बेठीक कुराहरु र भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिहरुका बिरुद्ध लड्नुपर्छ । र, सही कुराहरु स्थापित गर्न तपाईँहरुले लड्नु नै पर्छ । तपाईँहरुका विचारहरु, तपाईंहरुका कलमहरु, कम्प्युटरहरु र हातहरु यसरी चल्नुपर्छ।
तपाईँहरु आज एकताबद्ध भएर, एक ठाउँमा आएर र एउटा एकताबद्ध संगठन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ । यो लामो समयदेखिको इच्छा थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एउटा कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । जुनसुकै कुरा पनि पहिले सानोबाट सुरु हुन्छ । बिरुवा सानै हुन्छ, तर त्यो झाङ्गिँदै गएर ठूलो बृक्ष हुन्छ । बीचमा टुटफुट भयो, हाँगाहरु लछारिए, चुडिए र भाँच्चिए पनि । तर अब यो एउटा विशाल बृक्ष बनेको छ । हामीले फेरि आन्दोलनलाई जोडेका छौँ । हाँगाहरु सबै एक ठाउँमा भएका छन् । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप संचार क्षेत्रमा पनि एउटा एकताबद्ध वृक्ष बनेको छ । यसलाई सुदृढ गर्नु, जोगाउनु र अघि बढाउनुपर्दछ।
पुष्पलालले निर्माण गर्दा यो एउटा पार्टी नै थियो, आज हामीले संचालन गरिरहेका बेला पनि फेरि एउटै पार्टी भएको छ । यो समयको माग थियो, देशको माग थियो, देश विकासका निम्ति ज्वलन्त आवश्यकता थियो र यो एकता हामीले हासिल गरेका छौँ । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुलाई पराजित गरेका छौँ । सफल ढंगले नेतृत्व गरेका छौँ । अनि फेरि विरोध नै गर्नुपर्ने कारण के आइलाग्यो ? प्रतिक्रियावादीलाई पराजित गरिएको छ, राजतन्त्रलाई फालिएको छ । संविधान बन्न दिन्न भन्दा पनि बनाइएको छ। नाकाबन्दी हुँदा नझुकेर हटाइएको छ।
एउटा देशबाट वेष्ठित अवस्थालाई अर्को देशतिर पनि अनेक बाटाहरु खोल्ने काम गरेर भूजडित बनाइएको छ, त्यस ढंगले नाकाहरु खोलिएको छ, ट्रान्जिट, ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्टहरु गरिएको छ, बाटाहरु बन्दैछन् । सबैतिर विकास हुँदैछ । ग्यास र पेट्रोलियमका पाइपहरु हामीले बिछ्याउन सुरु गरेर उद्घाटन पनि गरिसक्यौँ । यस्ता थुप्रै कामहरु हामी गरेका ग¥यै छौँ । पूर्व–पश्चिम रेल पनि चलाउँदै छौँ । अनि ठूलाठूला कामहरु हुँदैछन् र सुधारका ठूला कामहरु हामी गर्दैछौँ । अनि विरोध नै गर्नुपर्ने कारण के हो ? विरोधको कारण त गलत नीति हुनुपर्ने, गलत व्यवहार हुनुपर्ने, असफलता हुनुपर्ने र आन्दोलनलाई कमजोर पारेको पो हुनुपर्ने ? आन्दोलनलाई मजबूत बनाइएको छ । हामीले विरोधीहरुलाई बाहिर निस्कँदा हेर्नै नसक्नेगरी पार्टीलाई मजबुत स्थिति बनाएका छौं । हरेक क्षेत्रमा सफल भएका छौं । फेरि किन विरोध गर्नुपर्ने ? विरोधीले त गर्छन् नै, विरोधीको त काम नै त्यही हो, गर्छन् । तर आफ्नै पार्टीका नेताहरुको विरोध किन र केका लागि हो?
हामी एउटा डुङ्गामा चढेका छौँ र एउटा गन्तव्यतर्फ हिडेका छौँ । कसैले डुङ्गामा प्वाल पार्दै जाने हो भने एउटा व्यक्ति मात्रै डुब्दैन, सबै डुब्छन् । तर म भन्न चाहन्छु, जसले प्वाल पार्न खोजेपनि यो डुङ्गा प्वाल पार्न दिइँदैनँ । जसले यो डुङ्गा डुबाउन खोजे पनि यसलाई डुबाउन दिइँदैनँ । जसले यस डुङ्गालाई उल्ट्याउन खोजे पनि उल्ट्याउन दिइँदैनँ । जसले यस डुङ्गालाई बीचमै डुबाउन खोजे पनि डुबाउन दिइँदैनँ । यो डुङ्गा हाम्रो ७० वर्ष लामो अनुभवबाट बनेको छ, सात दशकका अनुभवहरु बोकेर खियाइएको र चलाइएको डुङ्गा हो । यो डुङ्गा कुनै भवितव्यले बनेको होइन । यसो पानीमा पात तैरेको हुन्छ नि, त्यस्तो पनि होइन यो।
हामी समाजवाद निर्माण गर्नेतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ । समाजवादका आधारहरु तयार गर्दैछौँ । जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र समाजवादका आधारहरु बनाउँछौँ । समृद्ध नेपाल, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, त्यसैकारण हामीले भनेका हौं–सुखी नेपाली । समृद्धिले मात्र सुख हुँदैन । सुख हुनका लागि साथसाथै अरु थुप्रै कुराहरु हुनुपर्दछ । ती सबै कुराहरुको प्रबन्ध पनि हामीले गर्छौँ । हामी यही राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न अघि बढिरहेका छौं । यसमा तपाइँहरु सबै साथसाथै अघि बढ्नुहोस्।
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेस सङ्गठन नेपालको राष्ट्रिय भेला तथा सपथग्रहण समारोहमा ०७६ पुस १२ बालुवाटार, काठमाडौंमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
Published Date: Wednesday, 1st January 12:25:40 PM